Ịkwụ Ụgwọ ọrụ straipu jụ Bitcoin - Blockchain News
Ịkwụ Ụgwọ Processor straipu akwụsị Nkwado maka Bitcoin
Ugwo ọrụ straipu mara ọkwa na ọ ga-ahapụ bitcoin n'ime ọzọ ọnwa atọ na kpamkpam ịgbahapụ ya on April 23. Nke a kọrọ site ngwaahịa manager Tom Carlo na ụlọ ọrụ ukara blog.
Straipu malitere akwado bitcoin azụmahịa na 2015, enye ohere ugwo na bitcoins n'ihi na ihe karịrị 60 mba. Otú ọ dị, a ogologo oge nke azụmahịa nhazi, na-abawanye na ọnụ ọgụgụ nke kụrụ afọ n'ala azụmahịa na-eto eto ebubo mere bitcoin obere ewu ewu n'etiti straipu ọrụ: “Bitcoin na-adịkwa mkpa maka anyị ọrụ. Irubere trading ụlọ ọrụ nwekwara wee malite ịnata obere revenue si bitcoin, “- kwuru Carlo.
Tom Carlo kwuru na straipu “optimistically ese kaadị-ego n'ozuzu” na, ikekwe, n'ọdịnihu ga na-akwado ndị ọzọ altcoins, tinyere stellar, ma ọ bụrụ na mkpụrụ ego na-aghọ ihe na-ewu ewu. Na mgbakwunye, ọ na-ahụ a anya na ọrụ ndị dị ka Lightning, OmiseGO, Ethereum, Bitcoin Cash na Litecoin.
Ọtụtụ netwọk ndị ọrụ na-akwado ọrụ ngwọta:
Bitcoin dị ukwuu, revolutionary ọbụna ma e nwere ngwa ngwa, dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ vasatail #cryptocurrencies si n'ebe ugbu a. Ọ bụ oge na-eme ka ụzọ maka ọhụrụ ụmụaka na ngọngọ # StellarLumens #Ethereum
Ọ bụ ezie na ụfọdụ tụlee nke a a na-adịghị ahụ ụzọ nke ọma mee na eve nke amuma na nke ndị ọzọ scalability ngwọta maka Bitcoin netwọk, ọtụtụ ọrụ ka kweere na e nwere ọtụtụ cryptocurrencies na ike mpi na bitcoin.
E nweghị ụzọ na-ewetara a straipu ozi ọma dị ka ozi ọma. Anyị na-ihu ọma na-agwa niile n'oge adopter ahịa na ha mere ya na "ụzọ ọjọọ" na ugbu a ka retool ịgbakwunye àmụmà netwọk. Ma ha na-adịghị. Ha na-agaghị na-akpụ akpụ na Bitcoin ego (ma ọ bụ ndị ọzọ) ma. Ha na-ahapụ
Ekwela akpa ogho a toki dị ka "ọ bụghị pụtara maka ịkwụ ụgwọ na ọ bụ ihe ọzọ", ọ pụtara na anyị ga-echere ruo mgbe ilekota dị njikere ọzọ wee te-agbasa ozi ọma na onye ọ bụla a abụọ oge mgbe ụgwọ dị ala ọzọ. Ọ na-emetụta ihe niile mkpụrụ ego, ethereum bụghị "njikere" ma.
The ngọngọ ịgba ga a zụlitere afọ abụọ gara aga, tupu ọ bụla nke a ghọrọ ezigbo nsogbu, na anyị ga-zụta oge. Ma ụfọdụ ndị mmadụ FUD'ed banyere chepụtara echepụta n'ọdịnihu nsogbu na-ere a ga-eme n'ọdịnihu ngwọta na ahụ adịghị njikere na kere nnukwu ezigbo mbipụta na ugbu. /rant
alex na Sande @avsa
Ná mmalite December, na bitcoin-ịkwụ ụgwọ na-jụrụ site Steam game ọrụ. Ọzọkwa mgbanwe site Ethereum ngọngọ apụta ama mara ọkwa CEO nke Kik ozi Ted Livingston. Dị ka ya, Ethereum “-agbalị ịbụ ihe niile n'ihi na onye ọ bụla”, oke ṅụbigara na agaghịkwa na-emeju mkpa nke ndị na ngwa 10,000 ọrụ.
Ònye bụ John Hyman, ma ọ bụ ihe anyị maara banyere ndị Telegram ego ndụmọdụ
Previous Post:Robotrading ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka Trading